.:: IT WEB CRAZY BOY ::.: Blog မှာ Yahoo Web Player ထည့်ချင်ရင်
Blog မှာ Yahoo Web Player ထည့်ချင်ရင်
ကျွန်တော် အရင်တုန်းက Blog မှာ Mp3 သီချင်းတွေ Youtube က Video တွေကို တင်ချင်ရင် Embed ကုတ်တွေနဲ့
ထည့်ပြီး တင်ခဲ့ရပါတယ်။ ခု ဒီ Yahoo Web Player ကတော့ Template ထဲမှာ ကုတ်လေး တစ်ခု ထည့်ထားလိုက်ရင်
mp3 သီချင်းတွေ Youtube က Video တွေကို လင့်လေးတွေပဲ တင်လိုက်ရုံနဲ့ နားထောင်လို့ ၊ ကြည့်လို့ ရပါတယ်။
နမူနာ ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင် အောက်မှာ..
ရန်မဖြစ်တော့ဘူး (mp3 link)
ရန်မဖြစ်တော့ဘူး (YouTube link)
ကြိုက်တယ်ဆိုရင် အောက်မှာရေးထားတဲ့အတိုင်း အဆင့်ဆင့်သွားပြီး လုပ်လိုက်ပါ..
2 -> Template
3 -> Edit HTML ကို နှိပ်ပါ။
3 -> Template ကုတ်တွေထဲက </body> ကို ကီးဘုတ်က Ctrl+F နှိပ်ပြီး Search Box မှာ Enter ခေါက် ရှာလိုက်ပါ။
တွေ့ပြီဆိုရင် ဒီအောက်က ကုတ်ကို </body> ရဲ့ အပေါ်မှာ ထည့်ပြီးတော့ Save template ကို နှိပ်လိုက်ပါ။ ပြီးပါပြီ။
နောက်ပို့စ်တင်တဲ့အခါကျရင် အောက်မှာ ပေးထားတဲ့ ကုတ်လေးတွေကို HTML ကို နှိပ်ပြီး ထည့်တင်လိုက်ရုံပါပဲ။
<a href="https://googledrive.com/host/0B2_DQmuprDoiWkxPM0h5cWlyZ1k/Yan%20Ma%20Pyit%20Top%20Buu.MP3">ရန်မဖြစ်တော့ဘူး (mp3 link)</a>
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=hMAuZd9NMDA">ရန်မဖြစ်တော့ဘူး (YouTube link)</a>
မှတ်ချက်။ ။ mp3 လင့် နဲ့ Youtube Video လင့်တွေကို ပြောင်းပြီး တင်လိုက်ပါရန်..။
လင့်ပျက်သွားတဲ့အတွက် 04/08/2013 မှာ ကျွန်တော် လင့်အသစ် Upload ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါပြီ။ အဆင်ပြေကြပါစေ..
Posted by Thurainlin at 05:07
Labels: Blog, Coding, Mp3, Yahoo Web Player, You Tube